Ciidamada ammaanka oo Cadaado ku toogtay nin kadib markii laga shakiyey | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ciidamada ammaanka oo Cadaado ku toogtay nin kadib markii laga shakiyey
Ciidamada ammaanka ayaa goor dhow ku dilay afaafka hore ee xarunta Madaxtooyada Galmudug ee magaalada Cadaado nin ka mid ahaa ergooyinka ka qeyb qaadanaya doorashooyinka aqalka hoose ee halkaas ka socda.
Dilkan ayaa dhacay xilli gudaha madaxtooyada Galmudug ay ka socotay doorashooyinka xubnaha aqalka hoose oo saaka dib ugu bilaabatay Cadaado, waxayna wararku sheegayaan in la xiray askariga dilka geystay.
Ergooyinka ka qeyb qaadanayey doorashooyinka ayaa markii rasaasta la maqlay ka kala yaacay goobta, iyadoo mar kaliya goobtaas ay gashay xaalad jahwareer leh.
Ninka la toogtay oo magaciisa lagu sheegay C/llaahi Caraalle Dilib ayaa saraakiisha ammaanu waxay sheegeen in laga shakiyey ka dib markii uu is hor taag ku sameeyey ergada beeshiisa oo galaysay madaxtooyada si ay doorashada uga qeyb qaataan, isagoo diidanaa qaabka loo soo xulay.
Ciidamo AMISOM ayaa dhowaan la geeyey magaalada Cadaado oo ah xarunta kmg ah Galmudug si ay sugaan amaanka doorashooyinkaa halkaas ka socda.
Dilkan ayaa yimid markii la doortay dhowr Musharax oo ku guuleystay saaka doorashada aqaalka hoose ee saaka ka bilaabatay, waxaana dhiman doorashada musharaxiin kale.